Uyenza njani iMifanekiso yePhepha lodonga kunye neeKona ziJongwe ngokugqibeleleyo
Xa uxhoma iphepha lodonga, ii-seams kunye neekona zinokubonisa iingxaki. Musa ukuphelelwa lithemba. Ukuba ulandela ezi ngcebiso, unokuba nemigangatho kunye neekona ezijongeka njengengcali. Ukwenza umthungo ogqibeleleyo, indlela yokuthunga ixhomekeke, ngokuyinxenye, kwindawo.
Umzekelo, kwiikona zangaphakathi (okanye ngaphandle kwe-plumb ngaphandle kweekona), sebenzisa umsonto wokugoba kunye nokugquma , apho ithontsi elinye lisonga ikona malunga ne-intshi ye-1⁄2 kwaye elinye ilahleko ligubungela idrophu yokuqala kwaye iphele kanye ekoneni.
iziphumo ebezingalindelekanga zexesha elide ze-lyrica
Ukusebenza ngemigangatho yeempundu
Owona mthungo uqhelekileyo we-midwall yi impundu umthungo , apho imiphetho mibini ichukumisa khona kodwa musa ukugqagqana. Njengoko uxhoma ithontsi ngalinye, libeke ecaleni kwelandulelayo ukuze imiphetho ichukumise nje. Ukuba awuyifumani ngokuchanekileyo, yixobule kwakhona njengoko kufuneka ukuyibeka kwakhona. Ukuba iphepha lisadinga uhlengahlengiso, tyhala ngononophelo ngezandla ezibini ezoluliweyo.
Musa ukunyanzela iphepha elingalunganga endaweni ngokutyhala. Ukusebenza ngaphezulu kwephepha kuyalolula, kwaye xa iphepha libuyela kubukhulu balo obuqhelekileyo, umthungo uya kuvulwa. Unokukrazula udonga.
Sebenzisa i-roller roller ukutywina umthungo. Qiniseka kodwa ungacinezeli kakhulu ukuze ukhuphe konke ukunamathela. Njengoko ugqibile ukuxhoma ithontsi ngalinye, jonga umthungo wangaphambili. Ukuba umda uphakamisile, yibhale kancinci. Ukuba ikhutshiwe, tyibilikise iphepha ukuya kumthungo okanye ulinike umpompo omncinci ubheke ngomphetho ngebrashi egudileyo.
phezu iyeza gout counter
Ukwenza ukuncipha koncedo
Nanini na xa ujika ikona okanye iphepha ujikeleze umqobo, njengefestile, kuya kufuneka wenze isiqabu soncedo ephepheni. Kusikiwe kuphela ukusikwa kwelinye icala. Xa ujikeleza ujikeleza izithintelo zoxande, ezinje ngeendawo zombane, nangona kunjalo, kuya kufuneka usike kane; usiko olunye kufuneka luvele kwikona nganye, kwaye ukusikwa kufuneka kuqhagamshele ukwenza i-X. Kuya kufuneka wenze ukusika okuninzi okusondeleyo kwindawo ejikeleze igophe, enjenge-archway okanye isiseko sesibane esingqukuva.
Ukwenza isiqabu sokukhulula, tyibilika iphepha lisondele kumqobo kangangoko. Emva koko yenza ukusika endaweni endaweni yesitshetshe okanye ugwebe iphepha elisecaleni lomqobo kwaye ulihlambe kwakhona ukuze usike.
Yenza ukusika kokunceda ukwenza iikona kunye nemiphetho ijongeke ilungile.
Ezi meko zilandelayo zifuna ukusikwa koncedo:
Ngaphakathi nangaphandle kweekona zodonga: Smooth ukugquma udonga ukuya kwikona. Yenza isiqabu esikwe kwikona. Qalisa ukusika kunqamlezo lwedonga-lendlela kunye nokuyandisa kumda wephepha. Emva koko songa ikona.
Ukutshintsha kombane kunye neebhokisi zokufumana: Iphepha ngaphandle kwendawo ephumayo. Ukuqala kwikona nganye, yenza i-diagonal cut ukuze onke amanqamlezo aqhagamshele ukwenza i-X. Nqumamisa iimpazamo ngokwenza ukusika ukusuka kwikona ukuya kwikona ejikeleze i-perimeter.
Ifestile kunye nocango lomnyango: Sika iphepha, ushiye isibonelelo se-intshi ezimbini kwi-trim. Smooth iphepha ukuya kuthi ga kwicala le-trim kwaye uliguqule kwikona eyenziwe ngumbumba kunye nodonga. Yenza i-diagonal relief cut ukuqala ngokuchanekileyo kwikona ye-90-degree ye-trim kwaye wandise uye emaphethelweni ephepha. Iphepha eligudileyo ngaphaya kwefestile kunye nomnyango kwaye uqengqele umthungo. Okokugqibela, sika iinwele zakho nge-razor knife.
Imijikelo ejikelezayo okanye egobileyo: Smooth iphepha lide liye kufikelela kumda osondeleyo wesithintelo kwaye wenze isiqabu sinqumle kuloo mda. Smooth kancinci kwaye wenze isiqabu esinye sinciphise kwicala ngalinye lokusikwa kokuqala. Qhubeka ugudise kwaye usike.
idosi yehydroxyzine ngokobunzima
Handrail okanye umbhobho: Yenza ukusika okukodwa kwisithintelo ukuya emaphethelweni akufutshane ephepheni. Emva koko qhubeka nokucutha okuninzi. Njengoko ugqibezela isangqa, tyibilika kwaye umthungo osikiweyo omde ngendlela obuya kwenza ngayo umphunga.
uyicime njani itotshi ebomvu
zingaphi i-benadryl ezinokuthathwa yinja
amaqhuma abuhlungu kufutshane nomngxuma
Ngaba i-antibiotics iyayichaphazela i-depo shot
umyalelo wokukhangela amagama
amasebe obuKristu kunye neyantlukwano yabo
injana ayizukuhamba ngeenyawo